August လမှာ အကြိုက်ဆုံး… | Layma's World
« Why Do We Blog ??? ခြေလှမ်း… »
တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့, on September 4, 2007 at 3:36 pm said:
လေးမရွေးထားတာတွေ အကုန်ကြိုက်တယ်။ သနပ်ခါးပန်းကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
Layma, on September 6, 2007 at 10:36 am said:
ကျေးဇူးပါမလေး….. မလေးက ပန်းချစ်သူကိုး….ဟီး…လေးမလဲကြိုက်တယ်….
မိုးညို, on September 6, 2007 at 5:07 pm said:
tag သည်ကို ရေးပြီးကြောင်းပါခင်ဗျာ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … heart touching songs ကိုလည်း ထပ်ရေးပါဦး …